हो कि होइन, थाहा चाहियो ?
रुदाने अर्थात् रूपचन्द्र विष्ट । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एक जल्दाबल्दा अविस्मरणीय व्यक्तित्व । पञ्चायतकालीन बेथिति, कुरीति, विसङ्गगति र असङ्गति उधिन्न सफल रूपचन्द्र प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिका बिब्ल्याँटाविरुद्ध पनि उत्ति नै सक्रिय रहे । वि.सं.१९९० पुस २६ गते जन्मिएका रूपचन्द्रले २०५६ असार ७ गते यो संसार छाडेका हुन् । गत बुधबार उनको १८ औँ स्मृति दिवस मनाइएको स्मरणीय छ ।
नेपाली राजनीतिक यात्रामा यसो त अनेक नेता नभएका होइनन्, स्मृतिका पानामा चाहिँ कमै मात्र जीवन्त रहेका छन् । तीमध्ये एक नाम रूपचन्द्र विष्ट भएकामा दुईमत होओइन । रूपचन्द्र विष्ट आफ्नो गृहस्थल दामन–पालुङ, गृहजिल्ला मकवानपुर वा राष्ट्र नेपालमा मात्रै चर्चित रहेनन्, बाँकी दुनियाका लागि पनि अनौठा व्यक्तित्वका रूपमा जिज्ञासाको विषय बनिरहे । आज यद्यपि सशरीर उनी यहाँ छैनन्, त्यो बेग्लै कुरो तर उनी आफ्नो घतिलो, गतिलो थाहा दर्शनमा अमर रहेका छन् ।
थाहा अर्थात् ज्ञान, बोध, जानकारी, समझ, पत्तो, खबर, भेउ, मेसो हो । सुद्दी नभएको समाजमा थाहाको कति महŒव हुन्छ, भनिरहनुपरोइन । पर्चा, पोस्टर, नारा, भाषणका माध्यमले होस् वा साङ्गीतिक प्रस्तुतीकरणबाट होस् अथवा भित्तेलेखनबाटै किन नहोस्, जे जस्ता माध्यम अँगालेर हुन्छ, अनवरत थाहाको सन्देश फैलाउन सक्रिय रूपचन्द्र विष्ट जनताका मनमा बस्न यसै सफल भएका होइनन् । उनका दर्शन, सङ्घर्ष, आन्दोलन, मिहिनेत, निर्भीकता र जनतामाझ घुलमिल भइहाल्ने विलक्षण क्षमता नै अमूल्य निधि बनेका छन् ।
राजनीतिमा मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा थाहाको आधारभूत सम्बन्ध छ । थाहा हुने सुखी र नहुने दुःखी कुनै नौलो कुरो होइन । शोषण, उत्पीडनबारे थाहा भएपछि मात्रै शोषक, उत्पीडकविरुद्ध स्वर उर्लनसक्छ । रोगको थाहा पाउनेले मात्रै उपचारको बाटो समाउने हो । अन्यथा बेखबरमै सबैथोक बर्बाद भइसकेको हुन्छ । व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्र जहाँसुकै थाहाको महŒव रहेको छ ।
थाहालाई औपनिषदिक दर्शनसँग पनि तुलना गर्न नसकिने होइन । यो थाहा छान्दोग्य उपनिषद्को ‘तŒवमसि’सँग निकट देखिन्छ । उपनिषद्को तŒवमसि आत्मा, परमात्मासित सम्बन्धित छ । तŒवमसिले आत्मा र विश्वात्मा अथवा परमात्माबीच वा ब्रह्मसँग कुनै भेद नरहेको जनाउँछ । सबै आत्मा एक ब्रह्म भएको ज्ञान जगाउने काम तŒवमसिले गरेको छ । ब्रह्मज्ञानीहरूले यसैलाई आधार बनाई तिमी को हौ, जान ! भन्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् भने थाहा दर्शनले पनि जान्ने विषयलाई नै प्रधानता दिएको पाइन्छ । यसरी थाहा दर्शनको सम्बन्ध स्रोत पहिल्याउँदै जाँदा औपनिषदिक, वैदिक कालसम्म पुग्नसकिन्छ ।
अध्यात्मबाट अलग्याई राजनीति, विकास, चेतना, जागरण आदिसँग मात्रै सरोकार राखिँदा पनि थाहा दर्शनको औचित्य र महŒव उपल्लै स्तरको देखिन्छ । थाहा दर्शनको सान्दर्भिकता अहिले पनि कम नरहेको निर्विवाद यथार्थ छ । साँच्चै भन्ने हो भने यो दर्शन न केवल अहिलेका लागि अपितु सधैँ र सबैका लागि सर्वथा उपयोगी छ । नटुङ्गिदो सङ्क्रमणकालको जाँतोमा एकनासले पिसिँदो नेपालमा त यसको महŒव झनै छर्लङ्ग भएको छ । मुलुकमा संविधानसभाबाट संविधान त बन्यो तर संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि सबै समस्या छुमन्तर हुने सपना साकार हुन नपाएको पीडा व्यापक छ । संविधान अनुरूप राज्य रूपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढेको अवश्य छ तर आशालाग्दो रूपमा निर्धारित काम सम्पन्न हुनेप्रति आशङ्का धेरै छन् । पुरानो राज्य प्रणाली हटाउन ऐक्यबद्ध भएका राजनीतिक शक्ति नै बेमेलको शिकार हुँदा नयाँ राज्य प्रणाली कायम हुन गाह्रो भएको छ । १२ बुँदे समझदारी गर्दाखेरिका मित्र दल आपसमै विभिन्डिँदा सङ्क्रमणकाल लम्बिने डर बढेको छ ।
स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय निर्वाचन समयमै सम्पन्न भएका खण्डमा निश्चय नै मुलुकले अग्रगति लिनेछ अन्यथा फेरि कहालिलाग्दो राजनीतिक परिदृश्य नियति बनेर खडा हुनेछ । यसो हुन दिनु ठीक नभएको थाहा हरेक राजनीतिक दललाई हुनैपर्छ । प्रत्येक दलका नेताले थाहा पाएकै हुनुपर्छ, सङ्क्रमणकालको समाप्ति विना मुलुकको प्रगति सम्भव छैन । यस अर्थमा सङ्क्रमणकालको अन्त्य नचाहने दल मुलुकको प्रगतिका खिलाफमा रहेको थाहा पाउन कसैले पनि मगज खियाइरहनु पर्दैन ।
नेपालको राजनीतिक आकाशमा कालो बादल मँडारिएको अवश्य छ तर यसको आशय केवल नकारात्मक मात्रै छ भन्ने पनि होइन । पछिल्ला समयमा कालो बादलमा चाँदीका घेरा पनि देखिएका छन् । स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव सकिएको छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि ५ दिन बाँकी छ । पहिलो झैँ दोस्रो चरणको चुनाव पनि उत्साहपूर्ण अवस्थामा हुने लक्षण देखिँदैछ । प्रदेश तथा केन्द्रको निर्वाचनका लागि यसले दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । निर्वाचनमा अधिकांश दल सहभागी हुनु सुखद पाटो हो । आफ्ना माग पूरा नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने दाबी गरिरहेको राजपा नेपाल समेत परोक्ष तबरमा यसमा संलग्न रहेको भान हुन्छ । राजपाका कैयन् नेता स्वतन्त्र हैसियतमा स्थानीय तहको चुनावमा होमिनु त शुभसङ्केत हो नै साथै योभन्दा उल्लेखनीय कुरो उम्मेदवारका उम्दा भावना हुन् ।
सधैँभरि आन्दोलनमा लाग्दा गाउँघर, समाज र देश कसैको पनि भलो नहुने अभिव्यक्ति दिँदै सामाजिक सद्भाव बढाउने खालका विचार प्रवाह हुनुलाई सामयिक आवश्यकताको उपज मान्नुपर्छ । मधेशी, पहाडी र हिमाली जनजीवनबीच सद्भाव, एकता र सहकार्यको आवाज घन्कनथाल्नुलाई मुलुक नयाँ प्रवृत्तितर्फ ढल्कन लागेको शकुनका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन यसै पनि सामाजिक सहमति, सहकार्य र एकताको परिचायक हुन्छ । यसले जगाउने सन्देश प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा समेत प्रतिध्वनित हुनु जरुरी छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सुसम्पन्न गराई बाँकी सबै चुनाव पूर्ण गराउनेतर्फ सरोकारी सबैको क्रियाशीलता जरुरी छ । यसका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दल मात्रै तातेर पुग्दैन, यी सबैलाई झकझकाउन सर्वसाधारण पनि सजग तथा सक्रिय हुनु वाञ्छनीय छ । निर्वाचन नसकिएसम्म मुलुकले गति लिन नसक्नेहुँदा तमाम नागरिक समाज पनि उत्तिकै जागरुक हुनुपर्छ ।
राज्य रूपान्तरणको क्रमसँगै मुलुकमा सुख, शान्ति र समृद्धिको लहर पनि चल्नुपर्ने थाहा सबैलाई छ तर थाहा भए अनुरूप पाइला चाल्ने, चलाउने र चल्न कर लगाउनेतिर ककसले केके काम गर्नुपर्ने हो ? यतातिर चाहिँ थाहा जागेको अनुभूति पाइँदैन । अतः मुलुकमा जनसाधारणलाई समेत परिवर्तनको अनुभूति गराउन, विकास, निर्माणको लहर फैलाउन अपूर्व जुर्मुराहट आवश्यक छ । यस दिशामा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अभूतपूर्व कार्य सम्पन्न गर्नसक्छन् भने प्रदेश तथा केन्द्रका प्रतिनिधिले अद्भूत कार्यलक्षण देखाउनसक्छन् । यसका लागि अहिलेदेखि अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन सोच, समझ र योजना अपेक्षित छन् ।
चुनावताका ठूलाठूला वाचा गर्ने र जितेपछि आफ्नो तथा कार्यकर्ताका स्वार्थ पोषणमा मात्र लाग्ने विगतको परिपाटी पूर्णतः परित्याज्य छ । हरेक निकाय अत्यधिक अधिकारसम्पन्न भएको बेलामा ठूलो अठोट लिई काम गर्ने हो भने आउँदा पाँच वर्षमै मुलुकको कायापलट हुनसक्छ । यसका लागि प्रत्येक नेता, कार्यकर्ताले इमानदार हुनुपर्ने थाहा पाउनैपर्छ । बेइमानले रत्ती ठाउँ नपाऊन् भन्नेतर्फ यसो त चुनावकै बेलामा नागरिकले बुद्धि पु¥याउनुपर्छ, कदाचित् भूलचुक हुनपुगेमा बेइमानविरोधी निकायले तह लगाउन चुक्नुहुँदैन ।
भ्रष्टाचार केवल आर्थिक मात्रै नहुने प्रस्टै छ । यसैले नीतिगत, आर्थिक, चारित्रिक जे जस्ता भ्रष्टाचार भएता पनि समयमै त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई तह लगाउने बन्दोबस्त अपरिहार्य छ । राज्य रूपान्तरण हुने तर भ्रष्टाचार चाहिँ उही पाराको रहने हो भने मुलुक र मुलुकबासीको सुखको सपना कहिल्यै पूरा हुन सक्दैन । बदलिँदो परिवेश अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास अनिवार्य छन् । यसका लागि भएका निकायलाई कसरी अघि बढाउने ? अथवा ती निकायलाई समेत कुन संयन्त्रले निगरानी गर्ने वा अर्को कुनै विकल्पको खोजी गर्ने ? ठम्याउन ढिलाइ हुनुहुँदैन । भ्रष्टाचाररूपी क्यान्सरले सबै संयन्त्रलाई ध्वस्त बनाउनसक्ने हुँदा समयमै थाहा जगाई यसविरुद्ध अभियानकै रूपमा लागिपर्नु युगीन आवश्यकता बनेको छ । यस्ता अनेक पक्ष छन्, जसमा थाहा दर्शनको अनुपम महिमा लुकेको अनुभव गर्न सकिन्छ । थाहाको महŒवलाई आत्मसात् गरी हरेक क्षेत्रमा गहिरो थाहा लिई थाहा जगाउँदै अघि बढ्नु अथाह उन्नतिको परिचायक हुनेछ ।